China Yakavezwa panel-YA204 vagadziri uye vanotengesa Yingjiwei
Zvimiro zvealuminium yakavezwa pani
3. Inogona kugadziriswa kuita maumbirwo akaomarara sekugadzirwa
Aluminium yakavezwa pani inogadziriswa neakasiyana maburi kana akasiyana mapatani pane aruminiyamu mahwendefa nekuveza muchina. Kuburikidza nekuveza kugadzira, flat aluminium mahwendefa anogona kuenderera mberi achiwedzeredzwa nepfungwa yenzvimbo uye ave nemabasa ekupararira kwechiedza uye mweya. Iko shanduko uye machisi eakasiyana ekunze enviroment yekurapwa kwakakosha, zvichiita kuti mutsetse uve unofadza uye wakanaka. Kusiyana nepfungwa yechinyakare yemodelling, inokodzera makirabhu emazuva ano akasiyana siyana, kushongedzwa kwemba nemahofisi.
Aluminium yakavezwa pani inogona kutorwa seyakavharika aruminiyamu ndiro, inogona kutemwa ikatemerwa mhango nekukora kwe10.0mm, uye iyo yekugadzirisa equiments inoshandisa CNC muchina. Inonyanya kushandiswa kwezvinhu zvakasiyana-siyana, inzira yakanaka yekugadzirisa yekucheka akasiyana epamusoro precisioin, fomati hombe uye yakakosha machira maitiro. Iyo aruminiyamu pani inogona kuvezwa mune isiri-yakajairwa aruminiyamu machira ehukuru hwakasiyana uye chimiro sekuenderana nevatengi dhizaini. Uye inogona kuvezwa mune akasiyana mapatani senge masiringi, keteni madziro, mbiru uye zvichingodaro.
Chigadzirwa zita Aluminium yakavezwa pani
Chinhu It. YA204
Surface kurapwa PVDF kupfeka / Poda kupfeka / Anodized
Ruvara Chero chero RAL ruvara, akasimba mavara, esimbi mavara
Ukobvu 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm
Pashure: Perforated pani-YA313
Zvadaro: Zinga rejecha YB101